Accueil > Gazetin'ny nosy > Hazakaza-tsoavaly: Tsy ara-dalàna intsony ny PMU Madagascar
Hazakaza-tsoavaly: Tsy ara-dalàna intsony ny PMU Madagascar
Nivoaka tamin’ny fahanginana ka nitafa tamin’ny mpanao gazety ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny AHCEL na “Autorité Hippique pour les Courses et Elevage de Chevaux à Madagascar”. Raha fehezina dia ny AHCEL no rafitra nomen’ny fanjakana malagasy fahefana hifehy ny hazakaza-tsoavaly eto amintsika, izy ihany koa no rafitra tokana eto Madagasikara, afaka manome alàlana ireo orinasa filokàna amin’ny hazakaza-tsoavaly. Nampiaka-peo ny AHCEL satria misy ny fandikan-dalàna mibaribary izay ataona orinasa iray ankehitriny, tsy iza izany fa ny orinasa PMU Madagascar. Raha ny fanazavana nomen’ity rafitra mifehy ny hazakaza-tsoavaly ity dia tsy tokony hiodina eto amintsika intsony ny orinasa PMU Madagascar satria tsy ara-dalàna ny fijoroany, nanomboka ny 25 septambra tamin’ny taon-dasa. “Tsara ho fantatra ny Malagasy rehetra fa efa nampiatoana tamin’ny 25 septambra 2017 ny fifanarahana nifanaovan’ny AHCEL sy ny PMU Madagascar, noho izany dia tokony hiato ihany koa ny asan’ity orinasa ity, mandra-piandry ny fifanarahana vaovao raha toa ka mbola hisy izany. Ny AHCEL irery ihany mantsy eto Madagasikara no rafitra afaka manome fahazoan-dalana an’ireo orinasa filokàna amin’ny hazakaza-tsoavaly, koa rehefa tsy mahazo ny alàlana avy aminay dia efa naman’ny tsy ara-dalàna intsony”, hoy ingahy Rakotoarisoa Michelson, filohan’ny AHCEL. Nitondra fanazavana tamin’ny antsipirihany ny antony nahatonga izay fampiantoana ny fifanarahana nifanaovana tamin’ny orinasa PMU Madagascar izay moa ny filohan’ny AHCEL ka tamin’izany no nahafantarana fa ny tsy fahazakana ny fisiana orinasa hafa mpifaninana avy amin’ny PMU Madagascar no tena fositra ny olana. Tsara marihana aloha fa hatrany amboalohany dia efa tsy nanaja ny fifanarahana ity orinasa ity. Raha nifanarahan’ny roa tonta tamin’izany fotoana izany fa ny 5 isan-jaton’ny vola azo avy amin’ny lalao, na ilay antsoina amin’ny fiteny frantsay hoe “royalties”, no tokony ho anjaran’ny AHCEL, dia ny 3 isan-jato ihany anefa no nomen’ny orinasa PMU Madagascar, nandritra ny 20 taona. Io hetra 5 isan-jato io anefa dia tsara ny manamarika fa tsy vola manokan’ny AHCEL fa volana entina hampiroboroboana sy hanatsarana ny sehatra ny fiompiana soavaly sy hazakaza-tsoavaly eto Madagasikara. Tamin’ny taona 2016, nisy ny orinasa vaovao mpisehatra eo amin’izay loka amin’ny hazakaza-tsoavaly izay no nikasa ny hanokatra masohivoho maro manerana ny Nosy, dia ny PMU Bet. Ity orinasa ity izay avy hatrany dia nanao fifanarahana tamin’ny AHCEL ary nahazo ny fahazoan-dalana hiasa eto Madagasikara. Tsy nankasitraka izany moa ny PMU Madagascar, noho ny fahatahorana amin’ny fisiana mpifaninana matanaka, ka tsy naloan’izy ireo intsony ilay hetra antsoina hoe “royalties” 3 isan-jato.
Nandeha nitaraina tamin’ny PMU France izay tena tompon’ny lalao PMU maneran-tany ny AHCEL ka nahazo rariny. Ny PMU France raha teo izay nankato ihany koa ny fisokafan’ny PMU Bet eto amintsika. Niezaka nanantona ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny orinasa PMU Madagascar moa ingahy Rakotoarisoa Michelson saingy norahonana sy nampihorohoroana. Rehefa tsy nanaiky ny hifampiresaka mikasika ilay “royalties” tsy naloa intsony ireo tompon’andraikitra ny PMU Madagascar, dia niara-nanaiky daholo ireo mpikambana ao anatin’ny biraon’ny AHCEL, tamin’ny 25 septambra lasa teo, fa ampiatoana ao anatin’ny fotoana tsy voafaritra aloha ny fifanarahana sy ny fahazoan-dalana ahafahan’ity orinasa ity miodina eto amintsika. Tsy vitan’izay ihany fa rehefa niato ny fifanarahana teo amin’ny AHCEL sy ny PMU Madagascar, dia naaton’ny PMU France ihany koa ny fifanarahany tamin’ity orinasa ity, ny 2 janoary lasa teo. Manoloana izany rehetra izany, miantso ny ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana mba handray andraikitra manoloana izao tsy fanarahan-dalàna ataon’ny PMU Madagascar izao ny AHCEL.